भदौ ४ गते शुक्रबारकाे राशिफल - Baikalpikkhabar
श्री शालिवाहनीय शाके १९४२ ने. सं. ११४१ वि.सं. २०७८ साल भदौ ४ गते शुक्रबार, २० अगस्त २०२१ । राक्षस संवत्सर श्रावण शुक्लपक्षको त्रयोदशी तिथि २१ः०४ बजेसम्म, उप्रान्त चतुर्दशी नक्षत्र उत्तरषाढा २१ः३६ बजेसम्म, उप्रान्त श्रवण, चन्द्रमाराशि मकर, सूर्योदय ५ः३६ र सूर्यास्त ६ः३६ बजे हुनेछ ।
आज आफ्नो क्षेत्रका भ्रमण जमाउन सकिनेछ । पारिवारिक जीवन सन्तोषप्रद रहनेछ ।
धार्मिक यात्राको योग छ । आफन्तहरुको सहयोगले कामहरु अगाडि बढ्नेछन् ।
बौद्धिक कार्यमा सफलता मिल्नेछ । प्रेमीको सहयोग प्राप्त हुनेछ । दिन राम्रो रहेकोछ ।
आज रमणीय र सुखदयात्राको योगछ । सुन्दर परिहनले व्यक्तित्वमा निखारता ल्याउनेछ ।
मन खिन्न हुने स्थिति आउनेछ । यात्रामा मालसामान हराउन सक्छ । दिन सामान्य रहेको छ ।
वैदेशिक क्षेत्र कमजोर रहेकोछ । वेसुरमा वचन दिनाले अफ्ठ्यारो पार्न सक्छ ।
अतिथिको रुपमा सत्कार पाइएला । वैदेशिक क्षेत्रबाट सफलता मिल्नेछ ।
अवसरका लागि केही दैड धुप गर्नुपर्ला । काम थाल्न समय लागे पनि सम्वाना खोजी गर्ने समय छ ।
आजको मिहिनेतले निकट भविष्यमा नाम, दाम र प्रतिष्ठा दिलाउन सक्छ । पढाईमा रुचि बढ्ला ।
मिहिनेतले नाम, दाम र इनाम दिलाउनेछ । प्रयत्नगर्दा सजिलै लक्ष्यमा पुग्न सकिनेछ ।
कामको सन्दर्भमा विशिष्ट व्यक्तिहरुसँग मित्रता बढ्न सक्छ । भौतिक साधनहरु संग्रह हुनेछन् ।
अध्यात्मभाव जागृत हुनाले परोपकारी काममा प्रवृत भइनेछ । सामाजिक दायित्व पनि बढ्नेछ ।
शुक्रबार, ०४ भदौ, २०७८, बिहानको ०८:१६ बजे